Buna dhuguun umrii dheerinaaf faaydaa guddaa qaba, jedha qorannoon haarofni - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Buna dhuguun umrii dheerinaaf faaydaa guddaa qaba, jedha qorannoon haarofni
Oromoon bunaafi naga hindhabinaa kan jedhuuf waa malee miti! :)
Namoota buna dhuguu jaalattaniif oduun gaariin asbayeera. Guyyatti, akka qorannoon barruu Circulation addeessetti, buna kobbee shanii gadi dhugdu taanaan carraan isin dhibee onnee, sukkaara, dhibee sammuu fi cinqiin hubamuu baay’ee xiqqaadha. Buna kobbee muraasaan kana hunda ufirraa geggeessuun waan salphaadhaa dhiiroo!?
Gadaa tana dhukkuba bayiinsa lubbuu namoota hedduuf sababa guddaa ta’aa dhufan keessaa dhibeen onnee fi sukkaaraa sadarkaa guddaa irra jiru. Egaa bunaa fi umrii dheerinna kan wolitti hidhu waan biraa miti: Faaydaa bunni dhibee lubbuu galaafatan kanniin namarraa ittisuu ykn hir’isuuf qabu dha.
Dabalataan, qorannooleen kana duras buna irratti geggeeffaman kan mirkaneessan bunni faaydaa dhibee tiruu fi kaansarii namarraa ittisuus kan qabu ta’uu isaati.
Rakkoon fayyaa kunniin hinjiran ykn hir’atan taanaan hireen ganna hedduuf ardii tanarra jiraachuu bal’aa ta’a jechuudha, akka qorannoon kuni hubachiisutti.
Faaydaa bunaa kana kan saaxile qorannoo woggaa 30’f namoota 208,500 irratti geggeefame ta’uu isaati kan barreeffamni barruu Circulation irratti baye agarsiise.
Akkasuu ta’ee qorattoonni qorannoo kanaa buna hedummeessuun, daangaa ce’uun, faaydaa dabalataa kan hinqabne ta’uu isaa jala sararaniiru.
Bunaafi naga hindhabinaa Oromoon kan jedhuuf waa malee miti! 🙂
Previous articleXayyaarri Ruusiyaa biyya Masrii irratti kufe sababa boombiitiin jedhame
Next articleDawaa HIV guutummatti baalleessuu danda’u argachutti dhihaanne jedhu saayinsistoonni